Warning: getimagesize(article_uploaded_files/5f93cYadav.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home4/b1soft/public_html/nepalkoreanews.com/page.php on line 154
नेपालबाट टाढा प्रवासी भूमि घर बाट टाढाको विरक्त एक्लो जीवन र लामो समय सम्मको मजदूरी जीवन । रोजगारीको सिलसिलामा दक्षिण कोरियामा आएका नॆपाली मजदूरहरुको बाहिरी अनुहारलाई औसतमा यसरीनै वर्णन गरे हुन्छ । तर अलिकति समय निकालेर उनीहरुसँग भलाकुसारी गर्ने हो भने थाहा हुन्छ । उनीहरुको भित्री अनुहार भने प्रवासिए पनि आफ्‍नो देशको माया, प्रतिकुलनै भए पनि आपुनै लक्ष र त्यो प्राप्तिको लागि निरन्तर साधनारत एउटा छवि हो । दक्षिण कोरियामा मजदूरी जीवन बिताइरहेका धेरै नेपालीहरुसँग भेट्दा थाहा हुन्छ उनीहरु कारखानामा सामान्य मजदुरी गर्ने क्षमता राख्ने मात्र होइनन तर उच्च शिक्षा प्राप्त गरेका ,आफूमा कुनै प्रतिभा भएका , आफ्‍नो समाज रुपान्तरणको लागि योगदान पुर्‌याउन सक्ने क्षमता भएका व्यक्तिहरु पनि प्रसस्तै छन् ।
गत हप्ता म आन्सन स्थित हिमालयन नेपाली रेस्टुरेन्टमा प्रवेश गर्दा लोकप्रिय नेपाली गीत गुन्जिरहेको थियो । नेपाली स्वादको खाना खाइरहेका ग्राहकहरु गीतको मजा लिदै ताली बजाइरहेका थिए । मलाई लाग्यो नेपलबाट गायकहरु आई सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्दै छन । तर पछि थाहा भयो । तिनीहरु नेपालबाट संास्कृतिक कार्यक्रम गर्न आएका होइनन तर विदामा साथी भाइहरु सँग भेटी रमाइलो मात्र गरिहेका छन् । गीत गुन्जाउने हरु दुइजना मध्य प्रमोद भने तुरुन्त कतै लाग्नु भएकोले मैले भलाकुसारी गर्न पाइन तर अर्का गायक यादव श्रेष्ठ सँग भने मैले केही बेर भलाकुसारी गरेको थिएँ । । प्रस्तुत छ श्री श्रेष्टको परिचय र उहाँसँगको संक्षिप्त कुराकानी ।
नेपालमा मकवानपुर हेटौंडा घर भई हाल दक्षिण कोरियाको छुङजुमा रहनु भएका यादव श्रेष्ठ अरु जस्तै सामान्य श्रमनै गर्नुहुन्छ तर आपुनो मधुर स्वर र संगीत साधनाले अरुहरुको भ्न्दा छुट्टै परिचय राख्नुहुन्छ । मैले उहुसँग यसरी कुरा शुरु गरें ।
यादवजी तपाईंको सँगीत प्रति लगाव र शौख कहिले देखि शुरु भयो ?
- म विद्यालयकाल देखिनै गीत संगीत भने पछि हुरुक्क हुन्थें र विभिन्न साँगीतिक कार्यक्रम हरुमा भाग लिन्थें ।
अनि त्यस्तो लगाव भएको व्यक्ति विद्यालय पछि पनि त गायन क्षेत्रमै सकृय हुनुहुन्थ्यो होला नि ?
सकृय थिएँ । पोखरामा बसेर सँगीत सम्बन्धी तालिम लिएँ र विभ्ािन्न साँस्कृतिक कार्यक्रमहरुमा व्यस्त हुन्थें । त्यसैक्रममा अन्नपूर्ण एफएम बाट संचालित प्रतिभाको खोजि नामक प्रतियोगितात्मक गायन कार्यक्रममा २०५८सालमा प्रथम पनि भएको थिएँ ।
त्यस पछि ?
त्यस ।पछि म रोजगारीको सिलसिलामा मलेसियामा गएँ र मलेसियामा पनि गायनमा सकृय थिएँ । मेैले काम गर्ने कम्पनीमा एक हजार भन्दा बढी नेपालीहरु थिए । त्यो समूहमा भजन किर्तन जस्ता साँगीतिक कार्यक्रमको नेतृत्व मैलेनै गर्नु पथ्र्यो ।
कुनै एलबमहरु प्ानि निकाल्नु भएको छ कि ?
मलेसियाबाट फर्के पछि चर्चा नामक मेरो आपुनो एकल एल्बम निकालें ।
उपलब्धी त राम्रै भयो होला नि ?
आर्थिक उपलब्धि त केही भएन । तर चर्चा बाटै चर्चामा भने आइयो । गोरी हे गोरी मायाको दूरी बोलका गीतहरु श्रोताले धेरै मन पराए ।
तपाईं गायन क्षेत्रको प्रतिभा त्यसलाई चटक्कै छोडेर पुनः किन प्रवासिनु भएको त ?
होइन म प्रवासिए पनि गायनलाई माया मारेको त छैन नि । गायन मेरो जीवनको अभिन्न साथी हो र सँधै यसैमा समर्पित हुन्छु । यहाँ दक्षिण कोरियामा पनि साधना गर्दैछु र विभिन्न नेपाली सांस्कृतिक कार्यक्रमहरुमा भाग लिन्छु । र अर्को एल्बमको तयारी गर्दैछु ।
श्री श्रेष्ठको सुगीतिक यात्राको सफलताको लागि नेपालकोरिया न्यूज डटकम कामना गर्दछ ।